नाजायज सम्बन्धको बच्चा जन्माएर झाडीमा फाल्ने यि कस्ती आमा, चकित पार्ने आमाको बयान (भिडियो सहीत) -
पोखरा । पोखरा १६ बाटुलेचौर बस्ने एक महिलाले बच्चा जन्माएर लगत्तै झाडीमा लगेर फालिन । बिबाह भएपनी श्रीमानले अर्को बिबाह गरेपछी उनी अलग्गै बस्दै आएकी थिइन । उनले अर्को एक पुरुष संगको अनैतिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्माएर झाडीमा फालेको प्रहरीसंगको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । उदयपुर घर भएकी सिमा मगर लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनीलाई गर्भधारण गराउने पुरुष पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन । सिमाले किन यसो गरीन ? सिमाले प्रहरीलाई दिएको बयान चकित पार्ने खालको छ । घटनाको सम्पुर्ण नालिबेली सहीत सिमाले बयानमा के भनिन ? कृपया तलको पुरा भिडियो हेर्नुहोस :
अन्ततः अन्जनाका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, आफ्नो दाजु मानसिक रोगी नभएको खुलासा (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । जेठाजु द्वारा हत्या गरिएकी अन्जना लामा महत का श्री मान प्रज्वल महत पहिलो पटक मिडिया सामु आएका छन । आफ्नै दाजु उज्वल महतले आफ्नी श्रीमति अन्जनाको हत्या गरेको प्रहरी सामु स्विकार गरिसकेको भए पनि अन्जनाको हत्या नै गर्नु पर्ने कारण के थियो भन्ने बारे हत्याराकै मुखबाट एक पटक आफुले प्रत्यक्ष सुन्न चाहेको पनि बताएका छन ।